Xilliga ugu horreeya ee Guriga Kahor Mugdiga bilaashka ah ee Apple TV + | Waxaan ka imid mac
Guriga Kahor Xilliga Madoow XNUMX Bilaash Apple TV +
Uma baahni inaan ku xasuusiyo in Apple TV + uu yahay adeegga rukunka kaas oo aad ku daawan karto aflaam tayo leh iyo taxane. Si kastaba ha ahaatee, marba marka ka dambaysa shirkadda Maraykanku waxay bilawdaa dallacsiin sida tan hadda gacanta ku haysa oo kale. Mar haddii xilli -ciyaareedkii labaad ee Guriga Kahor taxanaha mugdiga ah, aan arki karno kan koowaad iyadoo aan la qorin adeegga. Bilaash ahaan waxaan ku geli karnaa si aan u aragno dhacdooyinka iyo baaritaannada Hilde Lysiak.
Hoyga Kahor Mugdiga wuxuu raacayaa raadkii gabadh la yiraahdo Hilde (oo uu jilayo Brooklynn Prince) oo ka soo guurta Brooklyn una gudubta magaalada harada yar ee aabbaheed ku noolaan jiray. Markay halkaas timaaddo, dadaalkeeda ah inay runta ogaato ayaa u horseedi doonta wuxuu soo saaraa kiis aan la xalin in dhammaan dadka tuulada, aabihiis uu ku jiro, ay si walba isugu dayeen inay qariyaan. Xilligii labaad, ka dib qarax aan la garanayn oo ka dhacay beer ku taal aagga, Hilde waxay bilawday baaritaan ka hor imaan doona mid awood badan oo saamayn badan leh. Waxa khatar ku jira caafimaadka qoyskaaga iyo dhammaan bulshada Ebor Harbor.
Dooddu waa mid aad u fiican iyo taxanaha sidoo kale. Haddii aadan ku qorin Apple TV + ha welwelin maxaa yeelay hadda waxaad ku arki kartaa xilli -ciyaareedkii ugu horreeyay gebi ahaanba adeegga Apple adigoon is qorin. Hab wanaagsan oo lagu helo macaamiil cusub. U adeegso mid ka mid ah taxanahiisa ugu fiican si aad ugu soo jiidato daawadeha waxyaalaha soo jiidashada leh ee cilmi -baarahaan.
Si kastaba ha ahaatee. ma garan doonno inta la heli doono dalabkan. Dhaqso fiican:
Bartiisa twitter -ka, koontada rasmiga ah ee Apple TV ayaa lagu dhajiyay in qof walba uu bilaash ku daawan karo xilli -horaadka Guriga Kahor Mugdiga. Inkastoo kaliya "waqti xaddidan" lama shaacin.
Wakhti xaddidan, waxaad ku daawan kartaa Xilliga 1aad ee Guriga Kahor Madow bilaash, gaar ahaan Apple TV + https://t.co/lkdhusWjEN pic.twitter.com/jaDjSIk1Rv
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Guriga Kahor Xilliga Madoow XNUMX Bilaash Apple TV +
Tim Cook ayaa macsalaameysay markii badeecad kale oo weyn la soo bandhigay
Apple waxay iibsataa adeegga qulqulka muusikada caadiga ah Primephonic